Kungani zemininingwane Izikhangibavakashi EJalimane Inxaniwe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Germany > Kungani zemininingwane Izikhangibavakashi EJalimane Inxaniwe
IJalimane inezintaba ezinhle kakhulu, emaphandleni adonsa umoya, kanye nemizi ehlukahlukene eyenza ukuhamba ngesitimela lapho kube yinto ehehayo. Bangu ezindaweni eziningi fabulous to see including Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, futhi Frankfurt, nabanye abaningi. Lezi okushisayo emadolobheni amancane konke oxhumene by kahle ihlelwe hi-speed uhlelo isitimela. Lokhu kwenza isitimela sokuvakasha eJalimane lula kangaka. Lapha liyisiqondiso holidaymakers ngoba isitimela sokuvakasha eJalimane ukuze kuqinisekiswe ukuthi iningi uhambo kujabulise kungenzeka.
Izitimela ahlukene akhona
Isitimela inethiwekhi German siqhutshwa Deutsche Bahn. Lokhu kunikeza eziningi izinhlobo isitimela imini nobusuku ukuthutha nawe. The main wesitimela senethiwekhi eJalimane yakhiwa izitimela lesifunda (ezifana express lesifunda) futhi izitimela phakathi kwamadolobha. izitimela kwamadolobha usebenza ekhaya nasemaveni angaphandle phakathi emizini eyinhloko.
Kukhona futhi ezinye izindlela Qeqesha travel eJalimane ezifana yasekhaya ngesivinini izitimela, I ICE (kwamadolobha Express). Lona isitimela ethandwa kakhulu e-Germany, yokuxhuma emizini eyinhloko ngesivinini. Lezi izitimela ngesivinini ukuhamba ngesivinini afika ku 200mph (320 km / h).
Ingabe ngidinga ukwenza isihlalo ukubhuka ezitimeleni German?
The best use of Train travel in Germany is during the day, kuhlanganise okusheshayo phakathi kwamadolobha Express, do not require seat reservations. Nokho, uma uhlela uhambo lwakho ayikho ingozi e yokubhuka izihlalo zakho kusengaphambili. Vikela isihlalo iwindo olubonisa indawo ezungezile noma nje ukhethe esihlalweni sakho ukuqinisekisa ukuthi indvudvuto esiphezulu.
Abanye izitimela International futhi imizila ngobusuku obubodwa njengokuthola Paris, Brussels, Venice, noma Copenhagen musa adinga ukuthi ube ukubhuka ngaphambi kokugibela. Lapho usebenzisa i-Londoloza Isitimela indawo ukubhuka amathikithi akho isitimela, ngeke sibeke ingabe uyafisa yini ukuthi ziyadingeka ukwenza ukubhuka.
Sebenzisa ikhabethe esiteshini – Izincwajana zemininingwane travel eJalimane
Iziteshi eziningi zezitimela zaseJalimane zinamabhange amaningi we eydijithali ngosayizi abahlukahlukene. Lena ukuze kuhlaliswe abancane umthwalo omkhulu. Uma une ezithatha ihora noma ngaphezudlwana ngaphambi amahlamvu yakho isitimela yokuxhuma, ukubeka yakho Umthwalo ibe eydijithali, hamba for isiphuzo, noma babukeke iDemo emhlabeni ezizungezile.
Frankfurt ukuze Hanover Izitimela
Brussels ukuze Hanover Izitimela
Cologne ukuze Hanover Izitimela
Intengo ikhabethe inquma amanani abo. Lokhu kusho uma udinga isitoreji ngoba umthwalo kancane, uyokhokha kancane futhi okuphambene nalokho. Ububanzi intengo esiteshini ikhabethe eJalimane phakathi € 1 – € 5 24 amahora ukusetshenziswa.
Izingane zingayithola i-Qeqesha travel eJalimane mahhala
Germany liyindawo enkulu ukuba ukuhamba nomkhaya. On ujantshi izitimela German, children under the age of six travel for free with no ticket needed. Children over 6 kodwa abaneminyaka engaphansi 15 futhi ukuhamba mahhala ngemuva kokuthi ephelezelwa umuntu omdala yokugibela okhokhela.
Ucabanga kokuthatha isitimela emhlabeni eJalimane? Iya Londoloza Isitimela Online ukuze uhlole zonke fares yethu kwekhethelo futhi uqale uhlela adventure wakho olandelayo! Silandele ku Facebook, Twitter, futhi Londoloza Isitimela Instagram Ikhasi ukuze babone izipesheli zethu zamuva nokuningi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
ujantshi German Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelgermany